Blaogy ho an'ny vaovao, toro-hevitra ary fampahalalana amin'ny tontolon'ny finday. Vaovao, fanadihadihana ary tsaho momba ny finday, takelaka ary gadget vaovao. Android, mananotena telefona sy iOS.
Xiaomi Redmi 7 nisintona ny famoahana 2019: Mandray ny fanamarinana 3C any Sina
Xiaomi dia nahazo toerana ambony tao amin'ny tontolon'ny smartphone amin'ny alàlan'ny Redmi-andiany. Ny seranam-piaramanidina Redmi 6 dia noraisin'ny mpividy sy ny mpitsikera mitovy ary ny finday no nitaky ny finday tany Inde nanomboka tamin'ny famoahana tamin'ny Septambra. Saingy toa i Xiaomi ...
Ny Cydia Store ho an'ny fitaovana jailbrokotra dia atodika amin'ny fomba ofisialy - Izao no tokony ho fantatrao
Io no faran'ny vanim-potoana ho an'ireo mpampiasa jailbreak amin'ny Cydia - ny App Store hanamafisana tanteraka ny rafi-pandaminana dia mihidy amin'ny fomba ofisialy androany. Ny mpamorona an'i Cydia, Saurik dia nanambara tao amin'ny Reddit Zoma hariva fa tsy nahomby ny sehatra.
Ny Free Capture app dia mampivadika iPhones sy iPads ao amin'ny scanner 3D an'ny AR
Hatramin'ny 2018 vao haingana, dia nitondra cameras ho an'ny enina amin'ny iPad sy iPhone ny sainam-pireneny, fa ny fitaovana voafetra dia voafetra ho tanjona roa: Ny ID ID dia manokatra sy mamorona Animojis cartoony. Ankehitriny dia misy fampiasana vaovao mandaitra ho an'ny fakantsary, tahaka ny ...
Ny Fahaiza-mirahavavy Galaxy S10 dia ho voafetra amin'ny US sy Korea Atsimo
Amin'izao fotoana izao, ny tatitra avy amin'ny tsaho dia milaza fa i Samsung dia hamoaka smartphone telo Galaxy S10 amin'ity taona ity. Na dia hita aza ny tatitra momba ny smartphone amin'ny 'fahaefatra' amin'ny 5G, dia tsy misy porofo manamarina izany tatitra izany taorian'ny Wall Street Journal. Ankehitriny, tahaka ny ...
Filaharan'ny mpanjifa iPhone Fitsapam-pamoherana ny Apple; Nino ny New iPhone XS Max Featured No Notch, fa ny Design All-Screen
Ny iPhone XS sy ny iPhone XS Max dia mampiavaka ny singa iray eo an-tampony amin'ny fanakanana ny singa Face ID rehetra sy ny fakan-tsary eo anoloana. Nandritra ny famoahana dia nampiasa tamba-jotra iray i Apple izay nanamboatra an'io tsokosoko io, nanome ny fijeriny fa ny iPhone XS sy iPhone ...
LG G6, V20, V30, ary V35 Mitadiava Google Camera Amin'ny Hafenana Amin'ny Hain-trano
Ny iray amin'ireo zavatra mametraka ny Pixels ankoatra ny fifaninanana dia ny app Google Camera. Mifanakaiky amin'ny fitaovana maoderina fitaovana, ny traikefa dia tsy manam-paharoa ary iray amin'ny tsara indrindra amin'ny tsena amin'izao fotoana izao. Ny vondrom-piarahamonina mpamorona ho an'ny Google Camera ...
Trifecta Of Galaxy S10 mameno ny fizarana fakantsary sy ny lokon'ny safidy Details!
Ny Samsung's Galaxy S10 fandaharana dia nahita teboka maro sy tsaho hatramin'izao. Ireo dia niavaka nandritra ny voalohan'ny volana novambra, ary hatramin'izay dia nihazona ny taham-pahavitrihana. Androany, manana tatitra hafa izahay ho an'ireo fakan-tsarimihetsika smartphones smartphones. Mipetraha eto ambany ny antsipiriany. ...
Ny tena haingana dia hoe Warp Charge 30 ao amin'ny OnePlus 6T McLaren Edition: Review
Miresaka momba ny fandrosoana amin'ny teknolojia sy ny fandefasana haingana dia iray amin'ireo fitaovana maoderina ilaina amin'ny finday izay noraisina tamin'ity taona ity. Nahita teknolojia fitrandrahana haingam-pandeha haingam-pandeha izahay, saingy ny lalao dia tsy miha-antitra intsony. Tamin'ny famoahana ny OnePlus 6T McLaren Edition, i OnePlus dia nanangana ny teknolojia haingana indrindra ...
Ahoana no fandefasana ny Call of Duty Mobile amin'ny Android eo anoloan'ny olon-kafa
Na dia talohan'ny PUBG (fohy aza ny kianjan'ny PlayerUnknown) na ny Fortnite dia nanjary hatezerana teo amin'ireo mpilalao finday, ny fantsom-baovaon-dohan'ny olona voalohany, antsoina hoe Call of Duty, dia nanao fanakianana manokana. Raha ny marina, mbola mitohy izany, fa ny lalao dia tsy misy afa-tsy PC, Xbox ary PlayStation, izay midika hoe manana ...
Oppo R17 Pro Review: SuperVOOC ho an'ny famonjena
Nanangana ny Premium R17 Pro any India i Oppo vao haingana, nitondra fifaninanana ho an'ny sokajy smartphone voalohany, izay tarihin'ny torolalan'ny OnePlus, Apple sy Samsung. Voatendry tao amin'ny Rs 17 ny Oppo R45,990 Pro ary azo jerena manerana ny firenena. Nefa ...
PUBG Mobile dia miady amin'ny adiny manokana: Bansa, fiankinan-doha ary fitsaboana ara-pahasalamana
Ny BattleUnit's Battleground, fantatra amin'ny anarana hoe PUBG, dia fahatsapana eo amin'ireo mpilalao finday ary nanjary lasa iray amin'ireo lalao mahomby indrindra amin'ny ankapobeny. Amin'ny fanintonana mpilalao smartphone an-tapitrisany, nahazo mari-pankasitrahana maro sy fitiavana ny PUBG Mobile. Nefa tsy ny masoandro sy ny raozy rehetra. ...
OnePlus 6T McLaren Edition miafina miafina navoaka [Watch]
Ny OnePlus 6T McLaren Edition dia namotopototra tamin'ireo tranga iraisam-pirenena tany Londres ny talata ary tao anatin'ny ora vitsivitsy manomboka izao dia halefa any India ny finday. Efa nosokajian'ny OnePlus ny sainam-piaramanidina farany izahay ary nijery ny kely bitan'ny finday sy ...
Asus Zenfone Max M2, Pro M2 an-tanana: Ny fahatsapana voalohany
Asus Zenfone Max M2 sy Max Pro M2 dia afaka manakorontana ny teti-bola sy ny tapany midadasika ao amin'ny tsenan'ny smartphone Indiana. KVN Rohit / IBTimes India mpanjifa elektronika mpanjifa, Asus dia nanambara ny laharana Zenfone Max M2, ny mpandimby ny orinasa popular Zenfone Max M1 ...
Xiaomi Redmi Note 6 Pro mivarotra mivantana dia mivelona any India: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao
Ny mpamokatra smartphone-n'ny indostria indostrialy Xiaomi dia miompana amin'ny famoahana ny fivarotana Redmi Note 6 Pro mivantana amin'izao fotoana izao amin'ny sehatra maro - fivarotana e-varotra sy biriky sy mortar. Sambany, ny orinasa dia nanara-maso akaiky ny fivarotana mivantana ho an'ny finday vaovao. Tany am-boalohany dia noraisina ...
Android Pie beta azo ampiasaina ao amin'ny Nokia 8: Izao no fomba hahazoana izany
HMD Global Oy dia navotsotra be tamin'ny famoahana Android Pie ho an'ny karazana Android maro, anisan'izany ny Nokia 7 (& 7.1) sy 6 (& 6.1), saingy manana fotoana sarotra hanitarana ny horonan-tsary mankany amin'ny Nokia 8. Miaraka amin'ny fahatarana, tsaho ...
Samsung Galaxy A8 miaraka amin'ny Infinity-O display, sary triplet aoriana
Ny mpamokatra smartphone-mpamorona Samsung dia nanambara ny Galaxy A8 izay efa nandrasana hatry ny ela, izay azo lazaina fa telefaona voalohany amin'ny finday manerana izao tontolo izao. Ny tsaho rehetra talohan'ny dingana ofisialy dia nahitana toerana teo amin'ny faminaniany ny endri-tsoratry ny Galaxy A8 vaovao. Manana endrika Infinity Display-O izy io ...
OnePlus 6T McLaren Edition dia navoaka tamin'ny £ 649: RAM 10GB, Warp Charge 30 ary misimisy kokoa
OnePlus dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny lahatsoratry ny OnePlus 6T McLaren farany tamin'ny hetsika iray tany Londres tamin'ny Talata, izay nitondra ny sari-mahery mahery indrindra hitanay. OnePlus 6T McLaren Edition dia ny fijoroana vavolombelona amin'ny OnePlus sy McLaren amin'ny filozofa "tsy miova" sy "filozofia tsy an-kiato", ary ...
Lany ny fotoana! Google dia nijanona Google Play Play fanohanana ny finday Android amin'ny OS OS
Google-n'ny Google Search Engine dia nanambara fa ny orinasa dia tsy hanolotra fanohanana intsony ho an'ny android Android OS OS efa misy Ice Cream Sandwich (ICS) intsony. ICS dia nanao ny laharana ofisialy tao amin'ny 2011 ary hatramin'izao dia misy vaovao fito vaovao Android OS tonga ary ny ICS active ...
Hajao 8C Famerenana: Faharatsiana any amin'ny faritra mampidi-doza
Honor dia manome antoka fa tsy hamela ny mpifanandrina handray ny anjaran'ny liona ao amin'ny tsenan'ny smartphone Indiana. Nanomboka tamin'izay, ny orinasa dia nanolotra ny smartphone Honor 8C mora azo, izay nividy tany India tamin'ny alàlan'ny HiHonor Store sy Amazon.in tamin'ny Alatsinainy. Raha toa ianao ka ...
Ny Samsung Galaxy A8 dia mifototra amin'ny: Manomboka ny fotoana, anton-javatra manan-danja ary bebe kokoa
Taorian'ny herinandro maromaro nateraky ny tombantombana, Samsung dia vonona ny hampiato ny famoahana ny Galaxy A8, izay azo ampiharina amin'ny sehatra vaovao ho an'ny finday ho an'ny finday ao amin'ny orinasa. Ny Samsung Galaxy A8s vaovao dia nokolokoloina ho hita any Beijing taorian'io androany tamin'ny 4 pm ...
1 2 3 4 ... 157 Manaraka
Microsoft Windows Support fitaovana Plugin Unité centrale Apache Up " 10 Fitaovana finday takelaka fikirakirana GNOME PDG toe-tsaina CentOS SSD fifamoivoizana ubuntu 15.04 YouTube loharano misokatra Ubuntu 14.04 Samsung Galaxy fikarohana iPhone USB Linux Ubuntu Systems Malagasy Bible File taona fitaovana Server Plugins rafitra 04 CentOS 7 Command 'App fitaovana finday Toetoetra HTTP Linux hametraka Unix Chrome MAMAKA Debian nbsp Windows 10 API Screen fanamarinana Apple Watch SSH Samsung rindrambaiko Phone Windows Phone Ubuntu 16 web browser Linux Mint MySQL Cortana lalao finday avo lenta SEO endri-javatra paoma Users lalao Apps Bing web server bilaogy ram Video HTML windows update "PC IP adiresy Firefox Nginx Facebook Twitter PPA Microsoft afa-po app store Performance Windows 8 haino aman-jery sosialy vaovao farany Ubuntu 14.10 One ' tahirin-kevitra Company Google famerenana Rafitra fikirakirana Ubuntu OS X Android PHP Windows famotsorana WordPress Database Time command line bilaogy fitaovana HTTPS raki-daza